RW Cumar C/rashiid oo dalka dib ugu soo laabtay kana hadlay qaraxii Hotel Central – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mogadishu Feb. 21, 15….Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Cumar Cabdirashid Cali Sharmarke, ayaa saaka dalka dib ugu soo laabtay, isagoona ka hadlay weerarkii Argagixiso ee shalay kooxaha Nabad diidku ay ku qaadeen hotelka Central, wuxuna tacsi u diray ehelkii, Qaraabadii iyo Qoysaskii ay ka baxeen dadkii shalay ku dhintay weererka, isagoo alle uga baryay kuwii ku dhaawacmay inuu caafimaad deg-deg ah siiyo.
“Falkan wuxuu na tusayaa in kooxaha nabad diidku ay cadaawad u qabaan dadka Soomaaliyeed, kuna beegsanayaan masaajidada iyo goobaha lagu cibaadaysto. Waxayna ka soo horjeedaan Soomaaliya oo nabad ah, midaysan, horumarna ku talaabsatay, mana aqbalayno dhaqamadaan ay ku dheehan tahay cadowtinimadu” ayuu yiri R/wasaare Sharmarke.
Ugu danbayntii, Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in xalay kulan deg deg ah ay isugu yimaadeen Madaxweynaha J.F.S Xasan Sheikh Maxamud , golaha Wasiirada iyo laamaha amniga, kaas logu sameeyey laba gudi oo midna baaritaan ku sameeya sidii wax u dhaceen, midna uu gacan ka gaysanayo sidii gar-gaar caafimaad loogu fidin lahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxyadaas, wuxuuna ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed iney gacan ku siiyaan ciidamada howlaha lagu sugayo amniga.
Madaxda Soomaaliya iyo Jabuuti oo dhagax-dhigay Xarunta Akadeemiya Goboleedka Afka Soomaaliga